Jungut Batu Beach amin'ny nosy Lenbongan. Bali " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Jungut Batu Beach amin'ny nosy Lenbongan. Bali
Jungut Batu Beach amin'ny nosy Lenbongan. Bali
Ny morontsiraka tsara indrindra any amin'ny nosy Lembongan
Jungut Batu Beach dia iray amin'ny toerana malaza indrindra amin'ny fialantsasatra sivily ao amin'ny Nosy Lembongan. Ny faritra akaikin'i Jungut Batu dia manana fotodrafitrasa efa novolavolaina, ahitana hotely, kafe, trano fisakafoanana, tranobe misy sambo sy sambo, fivarotana misy fitaovana fitetezana rano sy lomano Miovaova ny sakan'ny morontsiraka amin'ny fiakarana. Ny fahadiovan'ny morontsiraka dia tsara. Malemy sy mahafinaritra ny mikasika ny fasika.
Ary koa, ny morontsiraka dia manome fahitana tsara tarehy amin'ny masoandro mody.
Ity no morontsiraka lava indrindra any Lembongan. Miaraka amin'ny Mushroom Beach, dia iray amin'ireo ahazoana aina indrindra eto amin'ity nosy ity amin'ny lafiny fotodrafitrasa. Izy io dia manana endrika andohalambo voasaron'ny fasika, 2 km ny halavany, manomboka eo andrefana ka hatrany avaratra. Any avaratra, ny morontsiraka dia mifanila amin'ny ala honko. Sambo hafainganam-pandeha maro avy any Bali no tonga eto.
Any akaikin'ity morontsiraka ity dia misy ny ankamaroan'ny toerana fizahan-tany any Lembongan. Ireto dia hotely sy tokantrano maro karazana sokajy isan-karazany, trano fisakafoanana, foibe antsitrika, biraon'ny masoivohon'ny fizahan-tany, fivarotana fanofana bisikileta, fivarotana, bazaara kely, ATM, birao fifanakalozam-bola (na dia ao aza ny farany dia tsy dia misy tombony firy noho ny any Bali).
Ny fatiantoka ny morontsiraka Jungut Batu
Mandritra izany fotoana izany dia tsy mahaliana manokana ny morontsiraka Jungut Batu. Ratsy ny toerana eto, satria ny ankamaroan'ny morontsiraka dia sambo sy sambo no mitazona azy. Ka raha mijery ny ranomasina ianao dia miankina aminy ny masonao. Sarotra ihany koa ny mandro noho io.
Ny sambo atsimo amin'ny morontsiraka dia feno sambo. Jungut Batu Beach
Amin'ny morony avaratry ny morontsiraka ihany no tsy misy fitaterana rano ary misy ny fotoana milomano milentika sy milentika. Ny toerana tsara indrindra, malalaka sy madio, dia eo akaikin'ny Mahagiri Resort.
Jungut Batu Beach dia eo amoron'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Nosy Lembongan
adiresy: Gg. Nusa Indah, Jungutbatu, Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Bali 80771, Indonesia
mandrindra: -8.6738, 115.447083
Volkano Agung avy ao amin'ny Beach Jungut Batu
Ny moron'ny Jungut Batu Beach
Fotodrafitrasa eo amin'ny Beach Jungut Batu
Mandritra ny rivotra sy ny onja dia mety ho toa izao ny morontsiraka. Jungut Batu Beach
Beach eo amin'ny sari-tany
Jungut Batu Beach amin'ny sarintany nosy Lenbongan
Jungut Batu Beach amin'ny sari-tany satelita nosy Lenbongan